Martin Scorsese anotsvaga mari kubva kuApple TV yefirimu rake rinotevera | Ndinobva mac
Martin Scorsese anotarisa kuApple TV kuti awane mari yemufirimu wake unotevera
Kubva Apple TV + yakaburitswa zviri pamutemo munaNovember apfuura, Apple yekumhanyisa vhidhiyo sevhisi yaenda ichiwedzera katarogu yayo mwedzi wega, ingave mune akateedzana, firimu kana zvinyorwa zvemafomati. Kunyangwe yakasangana nemamwe matambudziko munzira (Iyo Bhangi), chinangwa chekutsigira indasitiri yemafirimu ichiripo.
Sekureva kweWall Street Journal, Martin Scorsese ari kutsvaga mari yemufirimu wake unotevera, firimu rakanzi Mhondi dzeRuva reMwedzi, mushure mekuona kuti sei, zvakare, Paramount Mifananidzo haidi kuenda kumberi neprojekiti, sezvakatoitika na VaIrish, firimu rekupedzisira remutungamiriri uyu rakaguma paNetflix.
Iyi firimu nyowani yaizove naLeonardo DiCaprio semutambi mukuru uye wake bhajeti iri pedyo nemamirioni mazana maviri emadhora, dambudziko reParamount iro rakamanikidza maScorsese kutsvaga mari paNetflix neApple TV +, sezvo isiri kuda kuita mari yakadai.
MuIrishman, firimu rekupedzisira naMartin Scorsese, akadzidziswa chete mumitambo yemitambo makumi mashanu neshanu muUnited States, isati yatanga paNetflix, nekudaro, iro rekuunganidzwa kwehofisi yebhokisi raigona kungofukidza chikamu chidiki chemari chakaitwa nehofori yekushambadzira vhidhiyo, an mari yakasvika 175 mamiriyoni emadhora.
Iyi poindi inogona kuve poindi inofarira, kuti iyi bhaisikopo nyowani igume pakupedzisira paApple TV +, kubvira Apple. Ivo vanobva kuCupertino vari kufarira kuburitsa mafirimu avo mumitambo vasati vatangisa pane yavo yekushambadzira vhidhiyo sevhisi. Uye zvakare, zvingangoita, ichasvika pachibvumirano neParamount, kuitira kuti izvi chengetedza kugoverwa kwemitambo uye Apple yakaisa mari kuti iite iyi nyowani yekugadzira yatinoziva zvishoma kana kana chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Martin Scorsese anotarisa kuApple TV kuti awane mari yemufirimu wake unotevera
Iwo "Nhasi kuApple" zvikamu kubva kumba
Ziva zvese zvishandiso zvakabatana kunetiweki yako neIP Scanner